यसरी हुनुहोस् सफल | BeniOnline.com.np जिल्लाका ताजा अनलाइन समाचार
Home समाचार यसरी हुनुहोस् सफल
यसरी हुनुहोस् सफल
२०७५, ११ फाल्गुन शनिबार २०:३८
हरेक कुरामा सफलता हासिल गर्ने चाहना सबैको हुन्छ । तर सफल हुने कुरा सजिलो भने होईन् । अस्तव्यस्त जीवनशैली समय तथा पैसाको म्यानेजमेन्ट गर्न नसक्नु तथा गन्तव्य निर्धारण नगरी हिड्ने बानीले गर्दा मानिस आफ्नै जीवनमा नमज्जासंग पछारिन सक्छ । सफलताका लागि सपना देख्न, कामना गर्न जति नै सजिलो छ त्यसलाई प्राप्तगर्न त्यति नै गाह्रो छ । जमाना क्षण प्रति क्षण प्रतिष्पर्धात्मक बन्दै गइरहेको छ । सफलताको चाहनगर्ने व्यक्तिले बुद्धत्व या निर्वाण प्राप्त गरिसकेको हुन्छ ।
१. लक्ष्य निर्धारण
सफलता प्राप्तिको सबैभन्दा पहिलो पाइला भनेको लक्ष्य हो । सफलता चाहने मान्छेले सर्वप्रथम आफ्नो रुचि अथवा आवश्यकता अनुसारको लक्ष्य निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ ।
२. योग्यता र ज्ञान
लक्ष्य निर्माणपछि चाहिने अर्को महत्वपूर्ण कुरा योग्यता र ज्ञान हो । लक्ष्य निर्धारणपछि त्यो लक्ष्य प्राप्तगर्न केकस्ता योग्यता, ज्ञान, सीप र कौशलता चाहिन्छन् त्यसलाई पहिचान गरी तिनीहरुलाई खोज्ने र प्राप्तगर्ने कामगर्नुपर्छ ।
३. स्पष्ट योजना
सामान्यतया सोचलाई नकारात्मक र सकारात्मक सोच गरी दुई भागमा बाँड्न सकिन्छ । यी दुई सोचहरुमध्ये सकारात्मक सोचले तपाईको लक्ष्यप्राप्तिमा ठूलो मद्दत गर्दछ तर त्यसको ठिक उल्टो नकारात्मक सोचले सफलता प्राप्तिमा ठूलो वाधा दिन्छ । वास्तवमा सोच नकारात्मक राखेर जति नै मिहिनेत गरे पनि सफलता प्राप्त गर्न सकिँदैन ।
सफलता प्राप्त गर्नका लागि अति नै महत्वपूर्ण तत्व भनेको हाम्रा योजनाहरुको कार्यान्वयन हो । सबैभन्दा धेरै मान्छेहरु कार्यान्वयनमा चुक्दछन् । धेरै मान्छेहरु लक्ष्य प्राप्तिका लागि राम्रो योजना र खाका बनाउँदछन् तर त्यो योजना र खाकालाई कार्यान्वयन गर्दैनन् या कार्यान्वयन पक्ष एकदमै फितलो हुन्छ । news24nepal.tv
Previous articleकालिका मन्दिरले विवाहलाई कडाइ
Next articleराष्ट्रिय खेलकुदका लागि ब्याडमिन्टन खेलाडी छनौट, म्याग्दीका सुरेन्द्र हमाल पनि परे